लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा ६ जना वेपत्ता ! - लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा ६ जना वेपत्ता !
लडाकु विमान दुर्घटना हुँदा ६ जना वेपत्ता !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० मंसिर, 08:39:10 AM
काठमाडौं । दुई अमेरिकी लडाकु विमान जापानमा एक आपसमा ठोक्किदा विमानमा सवार ६ जना वेपत्ता छन् ।
वेपत्ता सैनिकहरुको खोजी कार्य जारी छ । यसका लागि चिकित्सकहरुको टोली पनि क्रु मेम्बरहरुसँगै परिचालित छन् । खोजी कार्यका लागि जापानले पनि चार वटा एयरक्राफ्ट र तीन जहाज परिचालन गरेको छ ।
जापानले पनि खोजी कार्यमा सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरुले धन्यवाद दिएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार दुवै लडाकु जहाजले नियमित तालिमको क्रममा मरिन कर्प्स स्टेशनबाट उडान भरेका थिए । तर, बिहीबार दुर्घटना भयो । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान जारी छ ।
अमेरिकी नौसेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जापानमा ५० हजार सैनिक छन् र यो दुर्घटनालाई सामान्य भन्न मिल्दैन । गत नोभेम्बर महिनामा पनि अमेरिकी नेभी लडाकु विमान जापानको समुद्रमा दुर्घटना भएको थियो । यद्यपि, विमानमा सवार दुवै जना क्रु–मेम्बरलाई सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।
२०७५, २० मंसिर, 08:39:10 AM
दशकयताकै खराब दुर्घटनाका कारण क्युबा शोकमा